၈၈ ရဲ့ နော်မန်: 7/18/10 - 7/25/10
Trail Blazers introduce Rich Cho as new GM
source by : http://www.oregonlive.com
Posted by နော်မန် at 11:00 AM
Portland Trail Blazers hire former Sonic GM Rich Cho as new GM
Jerry Brewer, Seattle Time
Portland Trail Blazers's New General Manager Rich Cho
The Portland Trail Blazers —asometimes acrimonious, sometimes ingenious NBA franchise — hired Seattle-bred executive Rich Cho as their new general manager. You might remember him from the Sonics' pre-demolition days. His is the story ofalocal guy who tookahuge risk to dream, and now his ambition has led to the ultimate reward.
It would beaheartening thought if it weren't so disheartening.
You should be happy for Cho, very happy, but it remains impossible to be too enthusiastic about anything that happens in the league that's dead to you, right? From Jason Terry to Brandon Roy, the NBA lives on Seattle players. From Nate McMillan to Rick Sund, the NBA lives on coaches and executives with Seattle ties. But for all that Seattle deposits into the league, it withdrew the Sonics from this city two years ago. Since then, the success of homegrown talent has beenapainful contradiction.
As Cho was introduced to Portland, most of the local sports media was focused onaSI.com story from Frank Hughes, formerly of The Tacoma News Tribune, that revealed the Sacramento Kings met in Seattle with former Sonics executive Wally Walker aboutamonth ago. Some of Hughes' sources said the topic of relocation to Seattle was broached. But George Maloof, one of the Kings owners, denied it and deemed the meeting merely an opportunity for the arena-desperate Kings to learn why lobbying efforts foranew building failed in Seattle.
While it was nice to spend an afternoon daydreaming about the NBA returning to Seattle, it won't happen withoutanew arena, and taxpayers have expressed repeatedly that they have no desire to fund suchapalace. It never hurts to stay on the relocation radar, but pro-hoops addicts in this city might be relegated to years of innuendo that leads nowhere. They might get their hopes up again and again, only to realize that Seattle is nothing more thanacard that greedy owners show to try to get their cities to meet their demands.
That would get old quickly. The city deserves more than to be used for leverage.
But the league that's dead to you will beg to return someday. Seattle is exporting too much talent. It keepsagood chunk of the city engaged with the NBA, even if it's begrudgingly. When someone getsaclue and realizes that the NBA failed here because of bad business and not barren hoops prospects, then the game will be back, and you can celebrate the likes of Rich Cho.
Cho is an amazing story, and being the first Asian-American to hold this kind of NBA job is only part of it. Cho, 44, was born in Myanmar. His family moved to the United States in 1968 and settled in Federal Way.
He'sagraduate of Decatur High School and Washington State. After college, he worked for five years as an engineer at Boeing, but then he decided to go to law school. While working on that law degree at Pepperdine, he took an internship with the Sonics in 1995. He becamealawyer and worked his way up the organization.
He was the Sonics' director of basketball affairs, then the vice president of legal, then the assistant general manager. He remained with them through relocation to Oklahoma City. Now, even though he's known more asacapologist, contract guru and statistics analyst thanatalent evaluator, he is the man charged with turningayoung and talented Blazers team intoatitle contender.
Of course, the Blazers already hadagood GM in Kevin Pritchard, but that's another column. In Cho, owner Paul Allen may have rebounded from the dysfunction surrounding Pritchard's departure because he hiredaclassy, unassuming workaholic who will make well-reasoned decisions.
I'll always respect Cho for being kind and, well, human during the Sonics' final seasons. Along with GM Sam Presti and then-assistant GM Scott Perry, Cho was open and forthcoming and pleasant atatime when it felt like Clay Bennett wanted to alienate — and abuse — the media and all of Seattle. Cho is the kind of congenial, self-assured leader who can handleacumbersome partnership with Vulcan execs.
But the one thing Cho can't do is bringateam back to Seattle and manage it. So another homegrown product excels in the league that's dead to you. At least the NBA is forced to be grateful for Seattle's basketball talent.
source by : http://seattletimes.nwsource.com
Posted by နော်မန် at 9:13 AM
ယူနီဆက် စာအုပ်ကို ကျောင်းသားများအား ရောင်း
ဟောင်းဒိန် | အစိုးရစာသင်ကျောင်းတွင် ယူနီဆက် ဗလာစာအုပ်ကြေးကို ကျောင်းသူ/သားများက ဝယ်ယူနေရသည်ဟု ကျောင်းသားမိဘများက ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ် အထက်တန်းကျောင်းခွဲတစ်ခုတွင် ကျောင်းအပ်ခဲ့သည့်မိဘတို့က ဒုတိယတန်း ကျောင်းသင်ရိုးညွန်းတမ်း ကျောင်းသားတစ်ဦးအတွက် ၅၀၀၀ ကျပ် ဗလာစာအုပ်ကြေး ၅၀၀၀ ကျပ်ပေးရသည်ဟု ဒုတိယတန်း ကျောင်းသားမိဘ မိလှငွေက ပြောသည်။ ဗလာစာအုပ်ကြေး ၅၀၀၀ ကျပ် ပေးပြီး ယူနီဆက်တံဆိပ်ပါ ဗလာစာအုပ်ကိုသာ ရရှိခဲ့သည်။
“ဒီနှစ်မှာ ယူနီဆက်တံဆိပ်ပါတဲ့ ဗလာစာအုပ်တစ်မျိုးပဲ ကျောင်းကနေရတယ်။ မနှစ်က ယူနီဆက်ကနေ ပေးထားတဲ့ လွယ်အိတ်ရော စာအုပ်ပါ စာသင်ကျောင်းကနေရတယ်” ဟု မိလှငွေက ပြောသည်။
ယူနီဆက်မှ လှူဒါန်းပေးထားသော်လည်း ကျောင်းသားတို့မှာ အလကားမရကြောင်း မိလှငွေက ပြောသည်။
“စာအုပ်ထုတ်ဖို့ ၄၀၀၀ ကျပ် စေတနာကြေးနဲ့ ထောက်ပံ့ငွေက ၁၀၀၀ ကျပ်လို့ ကျောင်းသွားအပ်တဲ့အချိန်မှာ ဆရာမက ပြောတယ်” ဟု မိလှငွေက ပြောသည်။
အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာမတစ်ဦးက မြန်မာအစိုးရမှ မူလတန်းကျောင်းသူ/သားများကို အခမဲ့စနစ်ဖြင့် ကျောင်းအပ်ခြင်းကို ကျင့်သုံးခဲ့သော်လည်း စာသင်ကျောင်းများသို့ ပေးသောငွေ မရှိခြင်းကြောင်း ဆရာ/မများက ကျောင်းသူ/သားများထံမှ ယခင်ကဲ့သို့ ကောက်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကျောင်းဆောက်တာဆိုရင်လည်း အစိုးရက သူတို့ပေးသလောက်ပဲ သူတို့ပေးတယ်။ ကျန်တာ မလောက်လို့ရှိရင် ရွာခံက ကျောင်းက စိုက်ရတယ်” ဟု ဆောက်လုပ်ဆဲကျောင်းတွင် စာသင်နေသော မူလတန်ပြ ဆရာမတစ်ဦးက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ပညာသင်နှစ်မှစ၍ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ မြို့နယ် ၉ မြို့နယ်တို့တွင် ယူနီဆက်မှ ကျောင်းသူ/သားများကို သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများဖြင့် သင်ကြားပေးရန် ၄င်း ၉ မြို့နယ်ရှိ ဆရာ/မတို့အား သင်တန်းပေးခဲ့သည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် တစ်နှစ်ကပဲ မူလတန်းကျောင်းသူ/သားတွေအားလုံးကို လွယ်အိတ်နဲ့ စာအုပ် ယူနီဆက်ကပေးတယ်။ ဒီနှစ်မပေးဘူး” ဟု မူလတန်းပြဆရာမတစ်ဦးက ပြောသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ၄င်းသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သည့် ဆရာမတစ်ဦးက ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ၄င်းမြို့နယ် ၉ မြို့နယ်တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် အခြားမြို့နယ်၌ ယခုကဲ့သို့ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို မကြားမိသေးဟု ဆိုသည်။
သို့သော်လည်း ၄င်းကျောင်းရှိ စာသင်ခန်းတွင် ကျောင်းသူ/သားအရေအတွက်မှာ ၄၀ ကျော်ခန့်ရှိပြီး၊ တခန်းနှင့် တစ်ခန်း နီးကပ်နေသည့်အတွက် ကလေးများကို ထိန်းရသည်မှာ ခက်ခဲကြောင်း ကလေးများအားလုံး စာတတ်မြောက်အောင် သင်ကြားရာမှာ မလွယ်ကူကြောင်း မူလတန်းပြ ဆရာမတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကျောင်းသူ/သားများအတွက် လမ်းစရိတ်၊ အထွေထွေကျာင်းစရိတ် အကုန်အကျများသော်လည်း ကလေးများမှာ စာမတတ်ကြောင်း ကလော့သော့တိုက်နယ်မှ ကျောင်းသားမိဘတစ်ဦးက ပြောသည်။ အလယ်တန်းကျောင်းအတွက် ၁၅၀၀၀ ကျပ် အထက်တန်းကျောင်းအတွက် ၂၀၀၀၀ ကျပ် ကျောင်းအပ်စဉ် ကုန်ကျကြောင်း ခရီးစရိတ်အတွက် တစ်လလျှင် ၄၀၀၀၀ ကျပ်ခန့် ကုန်ကျကြောင်း ကျောင်းသားမိဘတို့က ပြောသည်။
အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာမတစ်ဦးက “ကလေးတွေကို အတန်းတင်ပေးတဲ့စနစ်ကြောင့် အတန်းကြီးလာတော့ ဒုက္ခရောက်ရတယ်” ဟု ဆိုသည်။ အချို့ကျောင်းသူ/သားများသည် ဆရာ/မမှ သင်ကြားသော သင်ခန်းစာများကို မလိုက်နိုင်သည့်အတွက် စာသင်နှစ်မကုန်ဆုံးမီ ကျောင်းမှ ထွက်ကြရသည်။
source by : http://monnews.org
Posted by နော်မန် at 11:01 AM
အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ် အလံတဝက်လွှင့်ထူရန် ပျက်ကွက်
ဝီရ / ၁၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၀
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ ကျဆုံးလေပြီသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ကျဆုံးခဲ့သည့် ဇူလိုင် (၁၉) ရက်နေ့၌ ဝမ်းနည်းသည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် နိုင်ငံတော်အလံတဝက် လွှင့်ထူသည့် အစဉ်အလာကို အစိုးရရုံး၊ ဌာနများ၊ မယကရုံးများက လိုက်နာခြင်း မရှိတော့ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံများထံမှ သိရသည်။
“ဒီနေ့မှာ ဘယ်ရုံးဌာနပဲဖြစ်ဖြစ် (နိုင်ငံတော်) အလံတဝက် လွှင့်ထားရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့် ရှိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်က အစိုးရဌာနတွေရဲ့ အလံတွေက တိုင်ထိပ်မှာ ဒီအတိုင်း ပုံမှန်လွှင့်ထားကြတာ မမြင်ချင်အဆုံးပဲ။ ဒီနေ့မှာ မြို့တော်ခန်းမမှာတောင် အလံအပြည့်ထူထားတယ်” ဟု ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူတဦးက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်အလံကို တိုင်တဝက်တွင် လွှင့်ထူထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် ရှုမြင်သူတိုင်း ဒေါသဖြစ်ရကြောင်း အဆိုပါ ရန်ကုန်မြို့ခံက ဆိုသည်။
“ဒီနေ့ အလံတဝက် လွှင့်မထားတဲ့ ရုံးတွေထဲမှာ မြို့နယ်ရဲစခန်းတွေ၊ ပြီးတော့ ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးရယ်၊ ကမ်းနားလမ်းတလျှောက်က ရုံး၊ ဌာနတွေ အားလုံးလိုလိုပဲ။ မလွှင့်လည်း ရတယ်ဆိုပြီး ဒါ သက်သက်မဲ့ လုပ်တာ” ဟု ရန်ကုန်မြို့တွင်းပိုင်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့သူ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား လူငယ်တဦးက ပြောသည်။
ယနေ့၌ ယင်းကဲ့သို့ တိုင်ထိပ်၌ နိုင်ငံတော်အလံ လွှင့်ထူထားသည့်အထဲတွင် ဗဟန်းမြို့နယ်၊ တာမွေအဝိုင်းအနီး၊ ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားရှိ ရွှေဂုံတိုင်ဆေးခန်း၊ မြေနီကုန်းရှိ ဒဂုံအရောင်းစင်တာ စသည့် ပုဂ္ဂလိကဌာနများစွာလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အစိုးရရုံးဌာနများက အလံတဝက် လွှင့်ထူခြင်း မရှိခဲ့သည်မှာ ယခင်နှစ်များတွင် ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်ကဲ့သို့ ထင်သာမြင်သာသည့် အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံတို့က ပြောဆိုသည်။
အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ သတင်းစာများတွင် ကဗျာ၊ ဆောင်းပါးများ ယနေ့ ဖော်ပြခြင်း မရှိသည့်အတွက်လည်း ဝါရင့်စာရေးဆရာတဦးက ဝေဖန်လိုက်သည်။
၎င်းက “အာဇာနည်နေ့ဆိုတာ လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းမှု မရှိတော့အောင် တမင်သက်သက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ လုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်။ အစိုးရရုံးတွေ အလံမထောင်ဘူး။ ဘာဖြစ်သွားလို့လဲ။ အရေးယူတယ်ဆိုတာ ဝေးရောပဲ။ ဒါကြောင့် လူတွေမေ့သွားအောင် တမင်ကို လုပ်ကြံတာ။ အခုဆို အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်က ဒီနေ့ နားရက်ရတာထက် ပိုမသိတော့ဘူး။ မထူးတော့သလို ဖြစ်လာကြတယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ စစ်အစိုးရရဲ့ ပယောဂ မကင်းဘူးဆိုတာ နားလည်သင့်တယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
source by : http://www.khitpyaing.org
Posted by နော်မန် at 3:24 AM
၆၃ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ဓါတ်ပုံများ
အဘဦးတင်ဦး နေအိမ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ၆၃ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ဓါတ်ပုံများ။
မှတ်ချက် ။ ။ အဘဦးတင်ဦး နေအိမ်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ၆၃ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ဓါတ်ပုံများကို ပို့ပေးလာသော “မိတ်ဆွေကြီး” အား အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by နော်မန် at 2:43 AM
၆၃-နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အမှတ်တရ
Posted by MoeThwayNge at 11:10 AM
Labels: ဓါတ်ပုံ, အမှတ်တရ
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသို့
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် အခုတစ်လော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှာ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်နေသူများကို ယခင်အတွေ့အကြုံ နဲ့ ယခုလက်ရှိ နေပြည်တော်လို့ခေါ်တဲ့ ကြပ်ပြေးမြို့တော်က သူငယ်ချင်းများရဲ့ ပေးပို့နေတဲ့ သတင်းများကို အခြေခံကာ သုံးသပ်တင်ပြချင်ပါတယ် ။
၁၉၈၈ ခု စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှာ AD လမ်းမှာနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းရဲ့ အိမ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော အရေးပေါ် အစည်းအဝေး တစိတ်တပိုင်းကို အရင်ဦးဆုံး ပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ ဦးနေ၀င်းနဲ့ သူ့ရဲ့လက်ရုံးတင်မဲ့ လက်သားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဦးစန်းယု၊ ဦးအေးကို၊ ဒေါက်တာမောင်မောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရကျော်ထင် အပါအ၀င် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
လက်ရှိတပ်မတော်ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေထဲမှာ ထိုစဉ်က စစ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်နဲ့ တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးခင်ညွှန့် တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ ဦးနေ၀င်းကနေပြီး “စောမောင်နဲ့ ခင်ညွှန့် တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကို အားလုံး သိအောင်ရှင်းပြ” လို့ အမိန့်ပေးတော့ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်ညွှန့်က တစ်နိုင်ငံလုံး ဆူပူအုံကြွပြီး အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းနေပြီ ဖြစ်တာရယ်၊ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးရုံးမှာ ပြည်သူလူထုနဲ့စစ်တပ် နားလည်မှု ရသွားတာရယ်၊ တပ်မတော်တွင်းမှာ စစ်သည်များ မကြေမနပ်ဖြစ်ပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတာတွေ၊ ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ဖမ်းဆီးရမိမှု အခြေအနေအလုံးစုံကို တင်ပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဦးနေ၀င်းက ဗိုလ်မှူးကြီးခင်ညွှန့်ရဲ့ တင်ပြချက်အပေါ် တက်ရောက် နားထောင်ကြတဲ့ အစိုးရခေါင်းဆောင်များရဲ့ သဘောထားကိုမေးခဲ့ပါတယ်။ မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကမျှ ထုံးစံအတိုင်း ဘာသဘောထားမှတ်ချက်ကိုမှ ဦးနေ၀င်းရဲ့ရှေ့မှာမပေး ရဲ ခဲ့ကြပါဘူး။ ဒီတော့ ဦးနေ၀င်းက မဆလပါတီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထု ထောက်ခံမှု၊ ဘယ်လောက်ရာနှုန်းလောက် ရှိနိုင်လဲဆိုတာ ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုမေးတော့ သူတို့က အဲဒီအချိန်မှာ တပ်မတော်သားတွေကို သူတို့ရဲ့ထောက်ခံမဲလို့ အပိုင်တွက် ထားပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တပ်မတော်မိသားစုနဲ့ မဆလပါတီဝင်အင်အားစုတွေကို ပေါင်းပြီးတော့ ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှု အနည်း ဆုံး ၆၀%အထက်မှ ရှိကြလိမ့်မည်လို့ တွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီနောက် ဦးနေ၀င်းက အဲဒီ အစည်းအဝေးမှာ လက်ရှိအာဏာယူထားတဲ့ လူကြီးတွေကို “မင်းတို့ စောမောင်နဲ့ ခင်ညွှန့်တို့ကို အာဏာ လွှဲပေးလိုက်တော့”လို့ အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက် ညွှန်ကြားတာကတော့ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီး ဖွဲ့ ဖို့ရယ် ဥက္ကဋ္ဌက စောမောင်၊ အတွင်းရေးမှူးက ခင်ညွှန့် ကိုထားပြီး တပ်မတော်က ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စစ်တိုင်းမှူးတွေကို အဖွဲ့ ၀င်တွေထားပြီးဖွဲ့ဖို့ ဦးနေ၀င်းက အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အာဏာလွှဲယူပြီး စစ်အစိုးရဲ့ကြေငြာချက် လမ်းညွှန်မှုအနေနဲ့ကတော့ ဒို့တာဝန်အ ရေးသုံးပါးကိုအခြေခံပြီး ရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ်ကို ကျင်းပမည်ဆိုတဲ့ (Guide Line) အား ဦးနေ၀င်းက အဲဒီအစည်းအဝေးမှာ ချမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဦးနေ၀င်းရဲ့ Guide Line တွေကို စာသားအဖြစ်ရေးပေးခဲ့ရသူက ဒေါက်တာမောင်မောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရသစ်ရဲ့ ပြည်သူလူထုထံ ပြောကြားသည့် ကြေငြာချက်ကို အဲဒီအစည်းအဝေးမှာဘဲ ဒေါက်တာမောင်မောင်က လက်ရေးမူနဲ့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ န၀တ ဖွဲ့စည်းတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်နဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်ညွှန့်တို့က အဲဒီအစည်းအဝေးမှာဘဲ ဘယ်သူတွေ ပါဝင် ဖွဲ့စည်းမည်ဆိုတာ ကို ဦးနေ၀င်းကို တင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ လက်ရေးမှုတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာရွက်တွေကို ထိုစဉ်က တပ်မတော်ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးသန့်(နောင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး) ဒုတိယတပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးသန်းထွန်း (နောင်ဘဏ္ဍာ ရေး ဒုတိယ၀န်ကြီး)တို့ (၂)ဦးက မြန်မာ့အသံကို သွားရောက်ပြီး စက်တင်ဘာလ(၁၈)ရက်နေ့ ညနေ (၄)နာရီမှာ နိုင်ငံတော်ကို ထုတ်ပြန် ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမိန့်ကြေငြာချက်တွေ ဆက်တိုက် ထုတ်ပြန်လာပြီး နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ပြည်သူ လူထုတွေကို ဆူပူဆန္ဒပြနေရာက ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းပေါ် တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် အနေနဲ့ အမှန်တကယ်ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ပြည်သူလူထုကို အာဏာလွှဲပေးမယ်ဆိုတာကို တရားဝင် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့သိသလောက် ဗိုလ်ချုပ်စောမောင် အဲဒီအချိန်က ယုံကြည်ခဲ့တာက တစညနဲ့ စစ်တပ်ကို ထောက်ခံတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ သည်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးရင်တောင်မှ အပြတ်အသက် မရှုံးနိုင်ဟု လျော့တွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ရွေးကောက်ပွဲကို သမာသမတ်နဲ့ လုပ်ဖို့ လက်အောက်ကို အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် မသိတာကတော့ တစညပါတီကို ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်မုန်းတီး နေတယ်ဆိုတာနဲ့ တစည အမတ်လောင်းတွေ(Golf)ရိုက်ပြီး စည်းရုံးရေး ဆင်းနေတာတွေကိုပါ။
ဒီ့အပြင် ဗိုလ်စောမောင်ဟာ ဦးနေ၀င်းနဲ့အစည်းအဝေးမှာ သူ့ရဲ့ ဆရာသမား မဆလ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောစကားတွေကို ယုံကြည်မိခဲ့တာတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကို ကျောထောက်နောက်ခံလုပ်မဲ့ အစိုးရကသာ အာဏာရလိမ့်မယ်လို့ သူ့အနေနဲ့ လျော့တွက်ခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ န၀တ တဖွဲ့လုံး မျက်လုံးပြူး မျက်ဆံပြူး ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ခြေမကိုင်မိ၊လက်မကိုင်မိ ကြိတ်မနိုင် ခဲမရဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
ဒီအထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်တဲ့အမတ်အချို့က စစ်တပ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်၊ အရေးအခင်းမှာ ပြည်သူတွေကို သတ်ခဲ့သူတွေ ဖေါ်ထုတ်အရေးယူရမယ်၊ စစ်တပ်တွင်းမှာလဲ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်နဲ့ အထက်ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဖယ်ရှားပစ်ရမယ်၊ စတဲ့အချက်တွေကို ကြွေးကြော်လာခဲ့တာ တွေ့ရှိလာပါတယ်။ စစ်တပ်အတွင်းမှာလဲ တပ်မတော်ရဲ့အနာဂါတ် ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကို စိုးရိမ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကိုလဲ ကျန်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ အပါအ၀င် န၀တအဖွဲ့ဝင်တချို့က ဖိအားပေးလာခဲ့တာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ပိုမိုရင်းနှီးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ချစ်ဆွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ဖုန်းမြင့်၊ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်ခင် (ရေ)၊ ဗိုလ်ချုပ်တင်ထွန်း(လေ)၊ ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဘ၊ ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေး၊ ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦး တို့ရဲ့ ဖိအားကိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် အရက်တွေ ဖိသောက်လိုက်၊ ပုတီးစိပ်လိုက် နဲ့ ဂယောင်ချောက်ခြား ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
NLD ကလည်း ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တဲ့ အမတ်တွေစုပြီး စစ်တပ်ကိုအာဏာလွှဲပေးဖို့ ဂန္ဒီခမ်းမမှာ စုဝေးပြီး တောင်းဆိုမဲ့ ကြေငြာချက်စာတမ်းတွေ ထုတ်မယ်လို့ သတင်းတွေလဲရခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ NLD ကို အာဏာလွှဲမပေးဖို့ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေနဲ့ အပေါင်းအပါတွေ သဘောထားတင်းမာတဲ့ သူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်တို့ ပါပူးတွဲပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကို တင်ပြလာတဲ့အခါမှာတော့ NLD ကို အာဏာလွှဲမပေးဖို့နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနိုင်အမတ်တွေဟာ အခြေခံဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲဖို့သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ န၀တရဲ့ ၁/၉၀ ကြေငြာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကတိကို လွယ်လွယ်လေး လက်နဲ့ရေးပြီး ခြေနဲ့ဖျက်ခဲ့တာကို အားလုံးအမှတ်ရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ၁၉၉၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ သင်ခန်းစာကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ ကောင်းကောင်းကြီး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်လဲ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကတိ ဖျက် ခဲ့ရတာရယ်၊ လက်အောက်က လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များရဲ့ Pressure တွေရယ်၊ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအင်အား စုတွေရဲ့Pressure တွေရယ်၊ ပြည်ပနိုင်ငံများရဲ့ Pressure တွေရဲ့ဒဏ်ကို အကြီးအကျယ်ခံခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံး ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ ရူးခဲ့ရတဲ့ အရှုးတပိုင်းလို ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်ကိုယ်တိုင် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေဘက်ကို ဘက်ပြောင်းခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် ဖယ်ရှားရေးကို တိုးတိုး တိတ်တိတ် ကြိတ်ပြီးစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာဘဲ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်နဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တသားတည်း ဥပက္ခာပြု ဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ နောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေတက်လာပြီး အမျိုးသားညီလာခံဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းစဉ်တပ်ကာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို လှည့်စားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားတွေကို ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက် အမျိုးမျိုးနဲ့ အယုံသွင်းခဲ့တယ် ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့ သတိပေးချင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ရှေ့တန်းကအော်နေရှာတဲ့ ကိုအေးလွင်(၈၈ကျောင်းသား)နဲ့ အဖွဲ့တွေကို အကျဉ်းကျနေစဉ် ထောက်လှမ်း ရေးအဖွဲ့တွေက ကြိမ်ဖန်များစွာနားချ စည်းရုံးမှုနဲ့အတူ အမျိုးသားညီလာခံဆိုတာကြီးကို ဘုမသိဘမသိ အချိန်ကတည်းက သဘောတရားရိုက်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ NLD ဖြိုခွဲရေးဆိုတဲ့ Plan အရလည်း NLD ထဲက မိုးလင်း၊ ကြည်ဝင်းတို့ အဖွဲ့တွေကို ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့ တွေကဘဲ ဖဲ့ထုတ်စည်းရုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယနေ့ ထောက်လှမ်းရေး ပျောက်သွားပေမဲ့ ဒီအဖွဲ့တွေကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်း ရွှေရဲ့(Psy War)မှာ အသုံးချဖို့ လက်ကွက် ကျန်ရစ်နေဆဲပါ။
ပြည်ပမှာဆိုရင် နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ပေါက်ရောက်တဲ့ အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံတွေကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်မဲ့ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်တို့၊ ဒေါက်တာဇာနည် တို့အား ထောက်လှမ်းရေးကဘဲ အသိမဲ့သတင်းပေး Unconscious Informer အဖြစ် သုံးခဲ့သလို ယခုလဲ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင် အပါအ၀င် English လို ဘိုလိုပြောနိုင်တဲ့သူတွေကို အများကြီး ပြန်လည်အသုံးချနေတာတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ် ပါတယ်။ နအဖရဲ့စည်းရုံးမှုကို ခံသွားရရှာသော အေးလွင် ကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြောချင်တာက ယခင်၊ ယခု အသုံးချနေတဲ့သူတွေကို မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေသွင်းပြီး ထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်စေမဲ့ အကြောင်းအရာများကို အခြေခံကာ မြှောက်ပင့်ပေးလိုက်သည့်အတွက် Brain Wash လုပ်ခံရမှန်းမသိ လုပ်ခံလိုက်ရတာကို သတိထားစေချင်ပါတယ်။
အဲဒီသူတွေကိုယ်တိုင်ကတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မသိ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုလည်း အမြင်မှန်တွေ ပြန်ရအောင် Brain Wash ပြန်လုပ်ပေးဖို့ လိုလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ယနေ့ နေပြည်တော်ကနေ သတင်းပေးပို့လာတဲ့ အတွင်းသတင်း တစ်ခုကို အသိပေးချင်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသည် ယခင်၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကဲ့သို့ မဖြစ် စေရန်၊(Plan)များ ရေးဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ် ၂၀၁၀ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကို မဖြစ်မနေလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
*(A-Plan) အနေနဲ့ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ အုပ်စုက ပြတ်ပြတ်သားသား နိုင်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်း ရွှေအနေဖြင့် အစိုးရဖွဲ့၍ အာဏာလွှဲပြီးပါက ၄င်းအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံကခေါင်းဆောင် တိန့်ရှောင်ပိန်၊ အီရန်နိုင်ငံက ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် အဌာကိုလာခိုမေနီ တို့လို ရှိနေမည်ဖြစ်ပြီး နေရာတိုင်း အစိုးရအဖွဲ့ကို ၀င်စွက်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
*(B-Plan) အနေနဲ့ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူများ ပြတ်ပြတ်သားသားမနိုင်ခဲ့ရင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ အတူ လက်ရှိ SPDC(သို့)အလားတူ စစ်ကောင်စီတစ်ခုသည် အစိုးရ၏နောက်ကွယ်တွင် ရှိနေမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေဖြင့် မြောက်ကိုးရီး ယား၊ကျူးဘားနိုင်ငံ တို့လို ယခင် မဆလဥက္ကဋ္ဌဦးနေ၀င်းလို ပုံစံမျိုး ဆက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
*(C-Plan) အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်တပ်ထောက်ခံသူများ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါက နောက်တစ်ကြိမ် စစ်တပ်က အာဏာပြန်သိမ်းဖို့ ဆိုပြီး Plan(၃)ခု ရေးဆွဲထား ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်။
ဒီ Plan တွေမတိုင်မှီ ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န်ထမ်းတွေမှ နေ၍ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အုပ်ချုပ်ပုံ အုပ်ချုပ်နည်းတွေကို သတင်းစုဆောင်းပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ရုံးကို အစီရင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၊ နည်းဥပဒေကို ရေးဆွဲဖို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက အမျိုးသားညီလာခံ ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသောင်းညွှန့်ကို တိုက်ရိုက် လမ်းညွှန်ပြီး ရေးခိုင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုမကုန်မှီ ဦးသောင်းညွှန့် ကိုယ်တိုင် အချောသတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေထံ လက်မှတ်ထိုးဖို့ တင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
မူလက ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ Election Law ထုတ်ဖို့လက်အောက်က စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ ရုံးကထွက်လာတဲ့ သတင်းအရကတော့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မှီ (၆)လလောက် လိုမှ အမိန့်ထွက်မယ်။ ပါတီတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် မလှုပ်ရှားနိုင်အောင် အချိန်ကန့်သတ် ထားတာဖြစ်တယ်။ ဒီ့ပြင်စစ်တပ်ထောက် ခံမည့် ကြံ့ဖွတ် အပါအ၀င်အခြား နိုင်ငံရေးပါတီတွေအပေါ် လက်ရှိအခြေအနေကို အားမရသေးဘူးလို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက မှတ်ချက်ပြုထားကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအဖွဲ့တွေကို ရက်တိုနိုင်ငံရေး မွမ်းမံ သင်တန်းတွေပေးဖို့ ကြံ့ဖွတ်ဝန်ကြီးတွေကို ဆူပူနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံတကာနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေအနေနဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေသစ်ကို အ နောက်နိုင်ငံတွေက လက်ခံလာအောင်လုပ်ဖို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေကို Pressure ပေးနေတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားပေမဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုမရဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုအစိုးရမျိုးဘဲ ပေါ်လာပေါ်လာ ထူးခြားမှု မရှိနိုင်ဘူး ဆိုတာကို ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေအနေနဲ့ သဘောပေါက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူ့အနေနဲ့ မထူးဇာတ်ခင်းပြီး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဆိုတာမျိုးလဲ လုပ်သွားနိုင်တယ်လို့ နေပြည်တော် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရုံးက ထွက်လာတဲ့ သတင်းတွေအရ သိရပါတယ်။
ယခု နောက်ဆုံးရတဲ့ သတင်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ဘယ်တော့မှ အာဏာကို လက်လွှတ်မှာ မဟုတ်၊သေရင်တောင် သရဲဘ၀ကနေ အာဏာကို ယူထားမှာဟု ၄င်းနှင့်နီးစပ်သော ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းက တဆင့် သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံး နားလည်ထားရမှာ ကတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ရလဒ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘာတစ်ခုမှ အကျိုးဖြစ်ထွန်းလာမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သေသေချာချာ နားလည်ထားစေချင်ပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ သာမန်အရပ်သူ အရပ်သားများတင် မက ပါဘူး။ တပ်မတော်သားများအားလုံးလည်း ကျေးကျွန်ဘ၀ကို ရောက်နေ ကြရတာပါ။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ဆက်လက်သွားနေလို့ကတော့ “ကျွန်” ဘ၀ကလွတ်မြောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မြန် မာနိုင်ငံကို စစ်ကျွန်ပြုမည့် ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံဖို့ လိုပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို တကယ်ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာလူမျိုးရယ်လို့ ဖြစ်စေချင်ရင် လက်ရှိစစ်အစိုးရကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မှီ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရယ်၊အတိုက်အခံအင်အားစုတွေရယ်၊ လယ်သမား၊ အလုပ်သမားများရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရယ်နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ ၀ိုင်းဝန်းဖိအားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလို ဖိအားကို အားလုံး တက်ညီလက်ညီသာ လုပ်ပေးမည်ဆိုလျှင် တပ်မတော်တွင်းမှာ ရှိနေသော ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ပါဝင်လာနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် တင်ပြချင်တာကတော့ စစ်တပ်အတွင်းမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ ကောင်းကျိုးအတွက် ပြုလုပ်ချင်နေတဲ့ အစုအဖွဲ့တစ်ခု ရှိ ကို ရှိ နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တုိ့ အားလုံးသာ သဘောထားကွဲတာတွေ တခြားကိစ္စတွေကို ဘေးဖယ်ထားပြီး “ကျွန်တော်တုိ့ နိုင်ငံအတွက်” ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက် တစ်ခုထားကာ ညီညီညွတ်ညွတ် စုပေါင်းလိုက်ကြရင် စစ်တပ်ထဲကလည်း ပါဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက် ပွဲကြီးဟာ ကျွန်တော်တုိ့လိုချင်တဲ့ ပုံစံမျိုး၊ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
* (ဆောင်းပါးသည် တနှစ်ကျော်က ရသော သတင်းအပေါ် အခြေခံထားသော်လည်း နအဖသည် ဆက်လျှောက် နေဆဲဖြစ်သည်။ )
Posted by နော်မန် at 1:14 AM
Portland Trail Blazers hire former Sonic GM Rich C...
၆၃ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ဓါတ...